Izindaba - Ngakho-ke i-coronavirus ingabulawa ngesibani se-ultraviolet
Umqedazwe Anti! Kuzoba isenzo esihlanganisiwe sabo bonke abantu eMnyangweni weNtwasahlobo ka-2020. Ngemuva kokuthola "ikhava" okunzima ukuyithola nokuxubha uShuanghuanglian namanye amahlaya, iqembu lethu labangane lancipha kancane kancane kusibani sokubulala amagciwane se-UV.
Ngakho-ke inoveli coronavirus ingabulawa ngesibani se-ultraviolet？
Uhlelo lokuxilongwa nokwelashwa kwe-coronavirus pneumonia kanye nohlelo lokwelashwa (uhlobo lwesivivinyo) olushicilelwe kuhlelo lwesine lweNational Health Protection Commission kanye ne-State Administration yemithi yendabuko yamaShayina lushilo ukuthi igciwane lizwela kwi-ultraviolet nokushisa, kanti izinga lokushisa liphakeme ngamaminithi angama-56 Imizuzu engama-30. I-Ether, i-ethanol engu-75%, i-chlorine disinfectant, i-peracetic acid ne-chloroform zingalivimbela ngempumelelo leli gciwane. Ngakho-ke, isibani se-ultraviolet disinfection siyasebenza ekubulaleni igciwane.
I-UV ingahlukaniswa nge-UV-A, i-UV-B, i-UV-C nezinye izinhlobo ngokuya ngobude bebude obude. Izinga lamandla liyakhula kancane kancane, futhi ibhande le-UV-C (100nm ~ 280nm) livame ukusetshenziselwa ukubulala amagciwane nokuvala inzalo.
Isibani sokubulala amagciwane se-Ultraviolet sisebenzisa ukukhanya kwe-ultraviolet okukhishwa yisibani se-mercury ukufeza umsebenzi wokuvala inzalo. Ubuchwepheshe bokubulala amagciwane be-Ultraviolet bunokusebenza ngenzalo okungafani nalutho uma kuqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe, futhi ukusebenza kahle kwenzalo kungafinyelela ku-99% ~ 99.9%. Umgomo wayo wesayensi ukwenza nge-DNA yama-microorganisms, ukubhubhisa ukwakheka kwe-DNA, futhi kubenze balahlekelwe ngumsebenzi wokukhiqiza nokuziphindaphinda, ukuze kufezekiswe inhloso yokuvala inzalo.
Ingabe isibani se-ultraviolet disinfection siyingozi emzimbeni womuntu? I-Ultraviolet inzalo inezinzuzo zokungenambala okungenambala, okunganambitheki futhi okungekho amakhemikhali asele ngemuva, kepha uma kungekho zindlela zokuzivikela ezisetshenziswayo, kulula kakhulu ukudala ingozi enkulu emzimbeni womuntu.
Isibonelo, uma isikhumba esidaluliwe sikhanyiswa yilolu hlobo lokukhanya kwe-ultraviolet, ukukhanya kuzovela kubomvu, ukulunywa, ukudideka; okubucayi kungadala umdlavuza, izicubu zesikhumba nokunye. Ngasikhathi sinye, futhi "kungumbulali ongabonakali" wamehlo, okungadala ukuvuvukala kwe-conjunctiva ne-cornea. Imisebe yesikhathi eside ingaholela ku-cataract. I-Ultraviolet nayo inomsebenzi wokucekela phansi amangqamuzana esikhumba somuntu, okwenza isikhumba siguge ngaphambi kwesikhathi. Esikhathini esingejwayelekile sakamuva, amacala omonakalo odalwe ukusetshenziswa okungafanele kwesibani se-ultraviolet disinfection avame kakhulu.
Ngakho-ke, uma uthenga isibani se-ultraviolet disinfection ekhaya, kufanele ukhumbule lapho usisebenzisa:
1. Uma usebenzisa isibani se-ultraviolet disinfection, abantu, izilwane nezitshalo kumele basuke lapho;
2. Amehlo akufanele abuke isibani se-ultraviolet se-disinfection isikhathi eside. Imisebe ye-Ultraviolet inomonakalo othile esikhunjeni somuntu nolwelwesi lwamafinyila. Uma usebenzisa isibani se-ultraviolet disinfection, kufanele kunakwe ekuvikeleni. Amehlo akumele abheke ngqo emthonjeni wokukhanya we-ultraviolet, ngaphandle kwalokho amehlo azolimala;
3. Uma usebenzisa i-ultraviolet isibulali magciwane ukufaka amagciwane kuma-athikili, ukusabalalisa noma ukulengisa ama-athikili, ukwandisa indawo ye-irradiation, ibanga elisebenzayo imitha elilodwa, kanti isikhathi se-irradiation cishe imizuzu engama-30;
4. Uma usebenzisa isibani sokubulala amagciwane i-ultraviolet, imvelo kufanele igcinwe ihlanzekile, futhi akumele kube khona uthuli namanzi enkungwini. Lapho ukushisa kwangaphakathi kungaphansi kuka-20 ℃ noma umswakama ohlobene ungaphezu kuka-50%, isikhathi sokuchayeka kufanele sandiswe. Ngemuva kokukhuhla umhlabathi, yibulale nge-magciwane ngesibani se-ultraviolet ngemuva kokuthi umhlaba womile;
5. Ngemuva kokusebenzisa isibani sokubulala amagciwane i-ultraviolet, khumbula ukufaka umoya okweqile imizuzu engama-30 ngaphambi kokungena egumbini. Ekugcineni, siphakamisa ukuthi uma umndeni wakho ungasitholakalanga isiguli, ungasebenzisi amagciwane ngemikhiqizo yasendlini. Ngoba asidingi ukubulala wonke amabhaktheriya noma amagciwane empilweni yethu, futhi indlela ephumelela kunazo zonke yokuvikela ukutheleleka okusha kwe-coronavirus ukuphuma kancane, ukugqoka amaski nokugeza izandla kaningi.
Isibani Samazinyo, Halogen Examination Lamp, Ukuhlolwa Kwezokwelapha, ukukhanya kwe-wall mount light, Kwaholela Headlight Okuhlinzwa, I-Halogen Lamp Ye-Biochemical Analyzer,